Balaa Tiraafikaa: Daandiiwwan gurguddoo balaan du'aa irraa hin fagaanne - BBC News Afaan Oromoo
Balaa Tiraafikaa: Daandiiwwan gurguddoo balaan du'aa irraa hin fagaanne
Aaddee Saamunee Yaalii jiraattuu Godina Shawaa Lixaa Aanaa Dirree Incinniidha. Akkamitti balaan konkolaataa godaannisa jiruusaanii irratti akka uume BBC'tti himu.
"Waanuma tokkollee seerri tiraafika hin eegamu, callisanii walirratti nama fe'u," jedhu Aadde Saamuneen.
Konkolaachiftoonni adabbiin isaan hin naasisu, poolisoonni Tiraafikaas arganiituma callisanii bira akka darban dubbatu.
Aadde Saamuneen balaan tiraafikaa miidhaa maatii isaaniirraan ga'e godaannisa hin dagannee isaan keessatti uumuu yaadatanii miira gaddaatiin dubbatan.
Balaan konkolaataa maatii ilmasaaniillee akka diigee himu.
Ilmisaaniillee haadha warraa waliin osoo imalarra jiranii balaa konkolaataan erga du'anii booda ijoolleesaanii warra malee hafan guddisuun dirqama akka itti ta'e himu.
Ijoollee maatii malee hafan kanas guddifachaaf gara biyya Faransaayitti erguu kan himan Aadde Saamuneen, balaan konkolaataa qe'ee isaanii diiguu ibsu.
Aadde Saamuneen abbaan warraasaanillee Amboorraa hojii daldalaaf gara Finfinnee osoo deemaa jiruu balaa konkolaataan lubbuu dhabuu yaadatu.
Konkolaataan duraan ittiin daldaluun maatii bulchanillee balaa kanaan waan manca'eef jiruun isaanii gadadoo ta'uu dubbatu.
Wallagga Bahaattii balaa konkolaataan namoonni 18 du'an
Hojataan ambulaansii ajjeechaa namaatiin to'annoo jala oole
Sirriitti to'achuu dhabuuniifi humna ol fe'uun naannoo Aadde Saamuneefaatti sababii balaa tiraafikaa naannoo jiraatanitti yaaddoo hawaasaa ta'edha.
Abbaa Taayitaa Geejjiba Oromiyaatti Daarektera Daarektoreetii Nageenya Tiraafikaa Mirkaneessuu Obbo Addisuu Tamasgeen BBC'tti akka himanitti, A.L.I ji'oota sadan jalqaba bara 2012 balaa tiraafikaatiin Oromiyaa keessatti lubbuun namoota 433 darbe.
Bara darbe kurmaana tokkoffaa keessatti ammoo lubbuun namoota 459 darbee jedhu Obbo Addisuun.
Qabeenya bara 2011 kurmaana tokkoffaatti balaa tiraafikaan manca'e ammoo Birrii 44, 541,221 ta'uu himan.
Bara kana ammoo kurmaana jalqabaa keessa qabeenyi barbadaa'e kan dabale yoo ta'u Birrii 63, 760,064.609 qaqqabuus qondaalli kun himaniiru.
Daarekterichi naannoon Oromiyaa giddu-galeessaafi bakka sochiin tiraafikaa itti baayyatu waan ta'eef balaan tiraafikaa baay'inaan naannoolee biyyatti kaanirra akka heddummaatu kaasu.
Bara 2012 kurmaana tokkoffaa keessa balaa 1,095 kan uumame yoo ta'u kan bara darbe ture 1,213 turerra 18n hir'ateera. Kunis ammoo balaa kana %3 hir'isuuf karoora qabannee, %5.7n hir'ateera," jedhan.
Balaan Tiraafikaa Oromiyaa Godina Addaaa Naannoo Finfinnee, daandii Harar fi gara Shaashamannee geessuurratti iddoo kaan caala akka baay'atu himan.
Dambii geejjibaa bahe eeguu dhabuun, caasaa mana hojiisaanii balaa tiraafikaa Oromiyaa keessatti mudatuuf sababa ijoo akka ta'e Obbo Addisuun amananii dubbatan.
Caasaan keenya to'annoo tiraafikaaf bobbaafame to'achuu dhiisuun, ariitiin konkolaachisuun , humna ol fe'uuniifi wantoota sammuu nama adoochaan fudhachaa konkolaachisuufi hirriba gahaa osoo hin rafiin konkolaachisuun jiraachuu balaaf ka'umsa ta'uu tarreessan.
Balaan qaqqabuu baay'een naamusa dhabuu konkolaachiftootaa wajjin hidhata akka qabu qo'annoon mirkaneefanneera jedhani.
Balaa tiraafikaa qaqqabu hir'suuf dhaabbileen leenjii konkolachisummaa dhuunfaa qulqullinaan akka leenjisan to'achuu, ogeyyii to'annoo tiraafikarratti bobba'an itti gaafatamummaasaanii akka bahan akka to'atan kaasa.
Meeshaalee teekinoolojii fayyadamuurratti qo'annoo akka biyyatti qoratamuu qaba jedhanii yaadu.
Hawaasnis balaa kana hir'isuuf qooda akka qabu kan kaasan Obbo Addisuun, imaammatni geejjibaa akka biyyaatti qopha'uu qaba jedhanii akka yaadan kaasan.
Komishinii Poolisii naannoo Amaaraatti bakka bu'aan Qajeelcha Nageenya Daandii Komaander Mulugeetaa Bezzee akka jedhanitti balaan tiraafikaa naannoo isaaniitti waggaa waggaadhaan dabalaa jira.
Balaa konkolaataa Godina Shawaa Kaabaatti qaqqabeen lubbuun 18 darbe
Balaan konkolaataa baayyachuu isaarraan kan ka'e saatii walfakkaatuufi bakka walfakkaatutti dhimma irratti argamuun irra jiru yoo qabaatan waliin hin deeman.
Kun ammoo yoo balaan qaqqabe 'tokkoon keenya yoo ofkalleef' yaada jedhuunidha jechuun dubbatu aanga'aan kun.
Naannoo Tigiraayitti ammoo balaan tiraafikaa 1512 ta'u A L I bara 2011 keessa qofaa qaqabuu isaa Daarekterri Daarektoreetii Poolisii Tiraafikaa naannichaa Komaandder Birahaanee Masqal BBC'tti himaniiru.
Naannoo Amaaraatti kurmaana jalqabaa A L I bara 2012 keessa balaan tiraafikaa 618 qaqqabeera.
Balaa uumame kanaanis namoonni 183 ta'an lubbuun darbee miidhaan qaamaa 219 qaqqabeera.
Akka dubbi himaan Daarektoreetii Komunikeeshinii Biiroo Geejjibaa naannoo Amaaraa Obbo Yibelxaal Taaddasaa naannoo isaaniitti Fulbaana irraa kaasee balaan tiraafikaa dabalaa deemeera.
Konkolaataan gara biyyaa galan baayyina ummata waliin yeroo ilaalamu gadi aanaa ta'uu kan dubbatan Komaander Mulugeetaan, balaan qaqqabu garuu ol aanaa ta'uu himu.
Kanaaf ammoo sababiin sirni to'annoo tiraafikaa haala balaa jiru to'achuudhaaf dandeessisuun kan diriirfame miti jedhan.
Balaan tiraafikaa gurguddoo dogogora konkolaachistoonni, warri lafoos ta'an raawwataniin akka mudatu kaasanii, itti-gaafatamummaa guddaa konkolaachisaan barbaadu hubachuu dhabuunis balaa qaqqabuuf sababa ta'uu ni ibsu.
Rakkoo daandii, rakkoo tekinikaa konkolaataa balaa uumamaniif muraasa akka ta'e kaasuun dogogoroonni warra lafoofi konkolaachistootaa garuu sababa guddaa ta'uu himan.
Ambulaansii Xabbitaa: Itoophiyaatti nama 'yeroo jalqabaaf' tajaajila ambulaansii dhuunfaa hundeessan
Godina Shawaa Kaabaa Ganda Sariitiitti balaa konkolaataa qaqqabeen namoonni 18 du'an
Naannoo Amaaraatti lakkoofsi namoota balaa konkolaataan du'an 23 gahan
Balaa konkolaataa kaleessa Ertiraatti qaqabeen namoonni 33 du'an